အာတီတာနဲ့ အဆက်အသွယ်ရကြောင်းနဲ့ လေ့ကျင့်နေကြောင်း ပြသသွားခဲ့တဲ့ တော်ရဲရား – Sports A2Z
အာတီတာနဲ့ အဆက်အသွယ်ရကြောင်းနဲ့ လေ့ကျင့်နေကြောင်း ပြသသွားခဲ့တဲ့ တော်ရဲရား
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဥရုဂွေးကွင်းလယ်လူ လူးကပ်စ် တော်ရဲရားက သူတို့ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြ မိုက်ကယ် အာတီတာကြားမှာ ခွဲခြား စောင့်ကြည့်ခံနေရပေမယ့်လည်း အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းနဲ့ အာတီတာရဲ့ အခြေအနေက တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်ကြံ့ခိုင်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တော်ရဲရားက ဒီရောဂါကို အာဆင်နယ်အသင်းဆီ ရောက်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးဘူးလို့လည်း ပြောကြားလိုက်ပြီး နည်းပြ အာတီတာအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းက ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ကစားသမားတွေအနေနဲ့ အိမ်တွေမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ပါရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့အထဲမှာ ဒီအသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်ကစားသမားကလည်း တစ်ဦးအပါဝင်အဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုပုံစံကို ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
#Yomequedoen? Trabajando y metiendo con la recuperación ??⚽️
?? COVID-19 ?
Todos juntos ? ?? vamosasalir adelante. #LT11 pic.twitter.com/tRBiWA6Hrq
— Lucas Torreira #LT11 (@LTorreira34) March 16, 2020
ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်အဝနဲ့ လန်းဆန်းနေတဲ့ ပုံစံရှိတဲ့ တော်ရဲရားက ၈ ပတ်ကနေ ၁၀ ပတ်အထိ အနားယူရနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာကို ပို့စ်မောက်နဲ့ပွဲမှာ ရရှိထားခဲ့ပြီး ခြေထောက်မှာတော့ အကာအကွယ်ဖိနပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားခဲ့သလို ရာသီမကုန်ခင်မှာတော့ ပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့လည်း ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။
တော်ရဲရားက ဥရုဂွေးကို လေကြောင်းလိုင်းတွေ ပိတ်ထားလို့ ပြန်လို့ မရဘူးလို့ဆိုခဲ့သလို ဆူပါမာ့ကက်တွေမှာ အိမ်သာသုံးစက္ကူနဲ့ လက်သန့်ဆေးတွေ ဝယ်မရဘူးလို့လည်း ညည်းပြသွားခဲ့ပြီး အမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဥရုဂှေးကှငျးလယျလူ လူးကပျဈ တျောရဲရားက သူတို့ကစားသမားတှနေဲ့ နညျးပွ မိုကျကယျ အာတီတာကွားမှာ ခှဲခွား စောငျ့ကွညျ့ခံနရေပမေယျ့လညျး အဆကျအသှယျရှိကွောငျးနဲ့ အာတီတာရဲ့ အခွအေနကေ တိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိတယျလို့ ထုတျဖျောပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒဏျရာကနေ ပွနျလညျကွံ့ခိုငျရေးတှေ ဆောငျရှကျနတေဲ့ တျောရဲရားက ဒီရောဂါကို အာဆငျနယျအသငျးဆီ ရောကျလာမယျလို့ မမြှျောလငျ့ခဲ့ဖူးဘူးလို့လညျး ပွောကွားလိုကျပွီး နညျးပွ အာတီတာအနနေဲ့ အမွနျဆုံး ပွနျလညျကောငျးမှနျလာပွီး အသငျးနဲ့ ပူးပေါငျးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ကွောငျးလညျး ဆိုပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးက ညှနျကွားထားတဲ့အတိုငျး ကစားသမားတှအေနနေဲ့ အိမျတှမှော ကွံ့ခိုငျရေးလုပျငနျးစဉျတှကေို ဆောငျရှကျရမယျလို့ ပါရှိတဲ့အတိုငျး လုပျဆောငျနတေဲ့အထဲမှာ ဒီအသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ ကှငျးလယျကစားသမားကလညျး တဈဦးအပါဝငျအဖွဈပွီး သူ့ရဲ့လုပျဆောငျမှုပုံစံကို ဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
ကွံ့ခိုငျမှု အပွညျ့အဝနဲ့ လနျးဆနျးနတေဲ့ ပုံစံရှိတဲ့ တျောရဲရားက ၈ ပတျကနေ ၁၀ ပတျအထိ အနားယူရနိုငျတဲ့ ဒဏျရာကို ပို့ဈမောကျနဲ့ပှဲမှာ ရရှိထားခဲ့ပွီး ခွထေောကျမှာတော့ အကာအကှယျဖိနပျကို ဝတျဆငျထားခဲ့သလို ရာသီမကုနျခငျမှာတော့ ပွနျလညျကစားနိုငျဖို့လညျး ပဈမှတျထားနပေါတယျ။
တျောရဲရားက ဥရုဂှေးကို လကွေောငျးလိုငျးတှေ ပိတျထားလို့ ပွနျလို့ မရဘူးလို့ဆိုခဲ့သလို ဆူပါမာ့ကကျတှမှော အိမျသာသုံးစက်ကူနဲ့ လကျသနျ့ဆေးတှေ ဝယျမရဘူးလို့လညျး ညညျးပွသှားခဲ့ပွီး အမွနျဆုံးပွနျလာနိုငျဖို့ လုပျဆောငျနတေယျလို့လညျး သူ့ရဲ့ အငျစတာဂရမျမှာ ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
အိမ်မှာ မနေဘဲ ဘောလုံးထွက်ကစားမိလို့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ မေဆန်မောင့်
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုနဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက် အထိရောက်ဆုံး အင်အား